लोकसेवा मनोवाद ।
बाँच्नलाई मात्र हो भने धेरै कुरा चाहिदैन । चाहिने त आत्मसन्तुष्टिका साथ बाँच्नको लागि हो। न्यूनतम पारिश्रमिकमा बाँच्न नसकिने हैन । तर सबै जना श्री कृष्णले गीतामा भनेको जस्तो योगी हुन सकिँदैन । न त डा गोबिन्द के सि जस्तै त्यागी हुन सकिन्छ । लोक सेवा अन्तर्गतको स्थायी जागीरले थोरैमा बाँच्न सिकाउँछ । एक प्रकारले वाध्य नै गराउँछ भन्नुपर्ला । हो । इच्छाको कुनै सिमा हुँदैन । तर इच्छाको बिरुवा नानीमोठी सम्भव पनि छैन । ।
“ यसपटक प्लेनमा जाउँ कि गाडीमा । प्लेन महँगो पर्छ ,गाडीबाटै जानुपर्ला । प्लेनबाट सजिलो त हुन्छ । “डाक्टर साब ” लाई प्लेनबाटै आशा गर्छन् । अरुले भनेर हुन्छ ? आफ्नो हिसाबले चल्ने पो हो । ...............“ यस्तै मनोबादले अन्त्यमा गाडीकै यात्रा प्रिय । प्लेन चडेर जाने त ट्रेनिङमा जाँदा हो।
“ अहिले नयाँ मोबाइल आएको रहेछ । दामी छ .... आदि । “ चियागफमा निस्किने सामान्य कुराहरु । सुन्दै रहर लाग्दो । “ किन्नुपर्छ कि क्या हो । दाम कती पर्ने रहेछ त । ६०००० पो रहेछ । होस् । ठिकै छ आफ्नै पुरानो मोबाइल । काम चलिरहेको छ । सस्तिएपछि किन्नुपर्ला । “ इच्छा नपलाउँदै मर्दै जान्छ दिनहुँ ।
“ कपाल पनि झरिसकेछ । कहिले फुर्सद भए पो हेर्नु । ऐनाले सम्म जिस्काउँदा केही फरक परेको थिएन । मान्छेले उमेरमै कपाल झरेछ त बाबुको भन्दा टाउकैमा किन हेर्दा हुन् जस्तो लाग्ने बेलाबेलामा । नयाँ प्रबिधिले कपाल रोपेर हराभरा बनाउन सकिने भैसकेको छ । कती लाग्दो रहेछ त भनेर बुझ्दा ३ लाख जति लाग्ने रहेछ । ८ ९ महिनाको तलब एकै पटक झ्वाम्म ! ठिकै छ । कृत्रिम काम नगरे नि हुन्छ । क्यापले नै ढाक्नुपर्ला । लोकको सेवा गर्न किन चाहियो र । ....."
“ सो रुममा गाडी राम्रै रहेछ्न् । चलाउन राम्रै देखिन्छ । आरामदायी पनि । ५० लाख नै पर्ने रहेछ । एक छिन दारी मुसार्दै बिचार गर्‍यो । अह .... पछि इन्स्टल्मेन्टमा लिनुपर्ला । अहिलेलाई नेपाल यातायात नै ठीक छ । कमसल क्वार्टरमा बसेर त २ -३ बर्ष बित्यो । गाडीमा सुत्ने पनि हैन । “
“ १० पछिको पढाई नै ८ बर्ष भैसकेछ । ३ बर्ष असुबिधायुक्त ठाउँमा लोकसेवामै बितेछ । अचेल मान्छेको पहिलो प्रश्न नै “ के को बिशेषज्ञ ! “ च्वास्स पर्छ र सम्झिन्छ ” अझै बाँकी पो छ त हो पढ्न । ठूलो डाक्टर हुन पढ्न पर्ने भयो । प्रतिस्पर्धा बर्षेनी गुणात्मक छ । ......... “ झसंग हुन्छ बेलाबखतमा ।
गान्धी जीवन अनुसरण गर्ने हो भने मजाले चल्छ जिवनचर्या । तर डाक्टर हुनुपुर्ब गान्धी आदर्शको पाठ नसिकेकोले डाक्टर भैसकेपछि त्यो आदर्श खोज्दा कठिन नै छ । यसै पनि आदर्शको मार्ग कठीन मार्ग हो ।यदाकदा भेट्टिएला । त्यसमाथि हाम्रो देशमा पहिले पढ्दा राजसी सपना भिराउने र डाक्टर भइसकेपछि “ गान्धीको व्यबहार राजाको सवारी ” आशा गरिने हुँदा पेशाको गरीमा ह्रास् हुँदै छ । सानैदेखि अब्बल विद्यार्थीले पढ्ने बिषय भनी मौलाएको डाक्टर हुने सपना। सपनाको लहरामा सामाजिक सम्पन्न्ता उनिएको उधारो आशा । आशा उन्दाउन्दै यथार्थसङको परिचय र आत्माले आदर्श पारीत्याग गर्ने कि नगर्ने भन्ने किंकर्तब्यबिमुढ अवस्था ।
हृदयलाई सम्झाउँदै सेवाउन्मुख हुने बिचार पलाउँछ । तर यदाकदा हुने घटनाले गर्दा सरकारले निमोठ्दै जान्छ । बेवास्ता गर्दै जान्छ । जनमानसिकताले पनि उखुजस्तै पेल्दै जान्छ । यस्तैमा बिचारको स्टियरिङ्ग घुम्छ र पछ्याउँछ् उनिएको पुरानो सपना पूरा गर्न । अनि सधैं कुर्लिन्छन् सबै जना ” डाक्टरहरुमा सेवाभाव नै भएन । पलायन भए ।कडा नियमले रोक्नुपर्छ । “
डाक्टरको पदले सबैलाई राम्रै झुक्क्याएको छ । कोट लगाएर चिटिक्क परेर बसेपछि ठुलै मान्छे हुन पर्‍यो । पहिरनले भएपनी । पैसाको बिटोका बिटो होला भन्ने जो छ सबै माझमा । तर सबैले आशा गरे अनुसारको भब्यता भने छैन । बाहिर देखिने भब्यताले नै होला काठमान्डौ पुतलिसडकतिर प्रबेश परिक्षा तयारीको घुइँचो कत्ती कम नभएको । ।
यसरी नै बाँच्न सिकेका छन् लोकसेवाको डाक्टरहरु । डाक्टरले प्राइभेटमा काम गरेकोमा नरुचाउनेहरुले बेलाबखतमा डाक्टरको दिनचर्याको अध्ययन गर्न पनि राम्रै हुने देखिन्छ । इच्छा भन्दा पनि आवस्यकता पूरा गर्न कठिन । “लोक सेवाको जागीर सामातेको ब्यक्तिले हो । जागिरले समातेको हैन । “ भन्ने हो भने हाल बिकल्परहित अवस्थाको बाध्यता हो भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
Vaskar Humagain April 10, 2018 at 8:18 AM
कुरो त सहि हो डाक्टर साब। हामीले जागिर समातेर कतियनलाई खुट्टा तान्दा तान्दै फुर्सद नै नभएको अर्को अवस्था पनि छ। :डि
Lanahksham April 11, 2018 at 6:09 PM
Dr. Prakash Nepali June 22, 2018 at 10:47 AM
Sahi 6a daju